Malabka iyo Galmada: Miraha Galmada U Fiican. | Arrimaha Bulshada
Home Wasmo Malabka iyo Galmada: Miraha Galmada U Fiican.
Malabka iyo Galmada: Miraha Galmada U Fiican.
Thursday, September 07, 2017 Wasmo Edit
Bulsha:- Waxtarka malabka uu leeyahay ayaa waxay yihiin kuwa aad u fara bdan. Malabka ayaa waxaa uu u fiican yahaya wasmada. Waxaa si dhaqan ahaan loo isticmalaa inuu daaweeyo kasci la’aanta, dareemaha la’aanta/yaraadaan iyo galmada kaa soo yaraato.
Malabka iyo Galmada
Galmada ninka iyo naagtaba ayuu aad ugu fiican yahay. Wuxuu kaalmeyaa kacsiga, awooda wasmada iyo xiisada galmada. Waxaa u kordhiyaa adkaanta guska amd dikirka.
Haddii aad hal tiiro aad markasta aad qashid oo dhaqsi. Waxaa isticmashaa malab si aad xiisahaada iyo awoodaada u kordhisid.
Waxaa dhici karto in ay shahwada ay si dhaqsi ah kaa imaado. Haddii aad qabtid dhibaatooyinkaas waxaa markasta daaimtaa malabka.
Malabka yaa waxaa loo isticmaalaa siyaabo kala duwan si uu kuu kaalmeeyo xagga wasmada. Wasmada macaanka ayaa waxaa laga helaa labada isqabta in ay wax iku dareemaan.Galmada dabada
Wasmada waa in qancis lahataa. Waa in ay qaadataa wakhti sii aad ugu raahaystid oo farxad aad ugu heshid.
Tani waxaa lagu heli karaa adoo isticmaalaysid malabka iyo, khudaar iyo miro kale.
Khudaarat U fiican galmada
Haddaba malabka ayaa waxaa uu ka mid yahay cunnda aadka u kaalmeeya galmada ninka iyo naagta.
Haddii aad doonayso in aad si fiicaan aad u galmooto ama aad rabto in oo galmada ay waqti ku sii qaadato. Waxaad istocmaashaa malabka.
Galmada iyo malabka
Malabka waxaa uu kordhiyaa awooda wasmada. Waxaa uu kuu dheereyaa saacadaha aad galmoon lahayd.
Wuxuu u fiican yahay nink iyo naagta labadaba. Wuxuu kuu yeelaya awood aad ku sii wadid wasmada. Malabka ayaa waxaa uu ka mid yahay cuntada tamarta dadka u yeesha.
Malabka waxaa aad u isticmaali kartaa adoo shaaha ku darsanayso, ama sidiisa aaan ku isticmaalisid.
Haddii oo kacsiga kugu yaryahay ama aad shaqada sariirta ama galmada aad yareysid. Malabka ayaa kuu ah mid oo kuu fiican oo kaalmo galmada u leh.
Waxaa kaloo u isticmaali kartaa adigoo caano ku qasaayo kadibna waxaa cabtaa marka aad wareega koowaad aad dhamaysatid. Waxaad kaloo cabi kartaa caanaha malabka ku qasan ka hor inta aadan galtoomin.
Miraha Galamda u fiican
Waxaa uu sifeeyaa dhiiga kasoo kordhiya shaqada dhiiga kasoo kalmeeya adkaanta guska ama dikirka. Malabka ayaa sidoo kale adkeeyaa dikirka ama guska sii uu si fiican u galtoomo. Waxaana kuu yeelayaa tiiro dheer dheer. Waxaana kuu ogolanayaa in aad dhowr jeer aad galmootid.